Owayesakuba yiBachelorette uRachel Lindsay Wont Wokuhlaziya ikhontrakthi yeFranchise - Inkcubeko Yopopu
Owayesakuba nguBachelorette uRachel Lindsay uthi akazukuhlaziya ikhontrakthi phakathi kwengxabano kaChris Harrison
Isidanga sokuqala I-franchise khange ihlale ingoyena mntu ubandakanyekileyo, eyayisakuba yinkwenkwezi ye-Bachelorette uRachel Lindsay wakhomba kwakhona emva kodliwanondlebe ophikisayo nomphefumlo uChris Harrison.
Ngoku, uLindsay uthethile ngezimvo zikaHarris ngokubhekisele kubuhlanga, esithi akazukuyihlaziya ikhontrakthi yakhe nelungelo lokuthengisa xa sele liphelile. Uhlalisa umphathi we-Bachelor Nation podcast kwaye ngamanye amaxesha usabonakala kwiziqendu zoluhlu.
indlela yokwenza iintyatyambo ezinomkhenkce
Ndidiniwe ndidiniwe. Ndidiniwe. Ndanele ngokwaneleyo, Lindsay utshilo Kwisiqendu sakutshanje se Imfundo ePhakamileyo ipodcast. Isizathu sam esipheleleyo sokwenza i-Bachelorette-kwaye ndandinethamsanqa lokuba yandisebenzela ngeyona ndlela intle yokufumana uBryan-kukuba bendifuna ukumelwa njengowesifazane oMnyama kwaba baphulaphuli. Kwaye ndifuna ukuvula indlela yokuba abantu abaninzi bafumane eli thuba, utshilo. Ngandlel 'ithile kwenzekile oko. Ndifuna i-franchise ibe ngcono. Ndinobudlelwane benzondo nothando nayo. Ndidibene nayo. Indenzele izinto, kwaye u-Ill akaze ayilibale lonto.
ULindsay wayengumkhokeli wokuqala oMnyama wokuqala kwisizini ka-2017 IBachelorette , apho wadibana nomyeni wakhe uBryan Abasolo. ULindsay ukwaligqwetha, kunye nombhaleli ongezelelweyo. Kwihlobo ephelileyo, njengoko uqhanqalazo oluqhubekayo lusasazeka e-US, wathi uyakushiya i-franchise ukuba abanatyala nge-Black Bachelor. Kwiintsuku kamva, umboniso wabhengeza iBachelor yakhe yokuqala eMnyama, uMat James.
Kodwa ingaba ndifuna ukubaninzi kangakanani koku? Utshilo uLindsay kwipodcast. Ndingazithatha phi izinto ezinje? Ndithe ndiza kuhamba ukuba bebengenazo izikhokelo zombala. Kulungile, bayenzile loo nto, kwaye benza nolunye utshintsho. Baqesha umcebisi weentlobo ezahlukeneyo-ngubani ongazange aye kwiklasi? Ngaba uChris Harrison akazange ahlale kuloo nto? Ndididekile ukuba ungabasebenzela njani bonke abacebisi, kodwa okwenzekileyo kwenzeke nje.
Amagqabantshintshi e-Harrisons afike emva kokuba iifoto zivelile kukhuphiswano lwangaphambili, u-Rachael Kirkconnell, esiya kwi-antebellum plantation-themed fraternity ngokusesikweni ngo-2018. Wayekwanqwenela nemifanekiso kwimidiya yoluntu ebandakanya iflegi ye-Confederate. Uxolisile ngolwesine, esithi ukungazi kwakhe bubuhlanga.
Ngexesha lodliwanondlebe kunye neLinsday, Isidanga sokuqala Inginginya ibonakale ikhusela i-Kirkconnell kwaye igxotha inkcubeko. Amagqabantshintshi akhe abangele ukungavisisani, emva koko uHarrison waxolisa ngomonzakalo awubangeleyo ngokuthetha ngokungalunganga ngendlela eqhuba ubuhlanga. Uye waxolisa nakuLindsay.
U-Lindsay uxelele i-podcast ukuba yena no-Harrison bathethe bodwa emva kodliwanondlebe kwaye unombulelo ngokucela uxolo, kodwa unexesha elinzima ngokwenene, ukuqiqa, okanye ukuthatha kunye nokwamkela olu xolo.
eyona nba yamaxesha onke
jim kunye nesiphakamiso se-pam
Abadlali abakhulu bebhasikithi abangama-50 ngalo lonke ixesha
zithatha ntoni i-netflix